မယ်သံ: နှစ်ကိုယ်တူ ဘ၀ ခရီး အစ (၁)
ဒုတိယပုံမှာ သတို့သားနဲ့ သတို့အဖေ ပုံစံချင်း ကွက်တိ၊ ချွတ်စွပ်ပဲ ..ရုပ်အနုအရင့်ပဲ ကွာတယ် :D
Thandar Lwin November 9, 2012 at 9:15 AM
ဟုတ်ပ ..မယ်စင်ပြောမှ သေချာပြန်ကြည့်မိတော့တယ်။
JuneOne November 1, 2012 at 9:01 PM
အပေါ်က ပြောတဲ့ အတိုင်းပြောမလို့ စိတ်ကူးနေတာ မမစင်ဦးသွားတယ်။ဟုတ်ပ တစ်ပုံစံထဲပဲ။
Thandar Lwin November 9, 2012 at 9:16 AM
အမြင်တွေ တူနေကြတယ် ဂျွန်ဝမ်း..:D
slym November 2, 2012 at 11:55 AM
Nice documentary post.
waiting to see your yangon wedding photos...beautiful brides!
Thandar Lwin November 9, 2012 at 9:17 AM
သိမ့် ရေ ရန်ကုန်ပုံတွေ တင်လိုက်ပေါ့ ..
ကူးကူးလှိုင် November 13, 2012 at 3:25 PM
ပထမဆုံးအကြိမ်လာလည်ရင်း စာတွေဖတ်သွားပါတယ် မင်္ဂလာပွဲလေးကြည့်ပြီး ကိုယ်ပါ အတူပျော်ရွှင်သွားရပါတယ်...